Uyakha njani iAnicecraft
Ukuyila i-adventure kwi-Minecraft kuyafana nokwakha i-minigame, kuba eyona nto ibaluleke kakhulu kulwakhiwo. Ubume be-adventure bumisela apho abadlali kufuneka baye khona, zeziphi izinto eziguqukayo ezilawula abadlali kunye nokusingqongileyo, kunye nokuqhubela phambili kwemiceli mngeni kunye nembuyekezo.
Apha, ungabona igumbi kumdlalo we-adventure ocelomngeni ngempumelelo, umvuzo, kunye nenkqubela phambili kubadlali. Xa igumbi livulwa, kuvela i-zombie, ibambe i-emerald eyenziwe ngokwezifiso. Xa isitshixo sibekwe kwi-hopper, indawo yokutshekisha ivuliwe kwenye indawo, kwaye umnyango wegumbi elilandelayo uyavulwa.
ipilisi emhlophe 54 543
Izinto kunye neebhloko zinokuba neethegi zedatha ezizodwa ezibanika amanqaku aluncedo kwiimephu zesiko.
Olu lwakhiwo lusebenzisa la magama alandelayo:
Ubudlelwane kumngeni wokukora: Abadlali banokuqhubeka kuphela ukuba bafumana isitshixo kwi-zombie, ke oko kufuna ukuba boyise i-zombie. Inkqubo ye-hopper yenza ukuba iinjongo ze-adventure zixhomekeke kolu celomngeni, umbono oluncedo kakhulu kuzo zonke iimephu ze-adventure. Umzekelo, kwimephu yephazili, ucango lunokutshixwa ngesibindi ngasekupheleni kwemizamo.
amayeza entlungu yomlenze
Unxibelelwano phakathi kwamagumbi: Unxibelelwano phakathi kwe-hopper kunye ne-checkpoint ekhankanywe ngasentla ngumzekelo wamagumbi achaphazela ngokwenene. Ezinye iimephu ze-adventure zisebenzisa le nto rhoqo, zigcwalisa indawo phakathi kwamagumbi ane-webs ebomvu. Nangona kunjalo, ukuba wenza into enje, kufuneka ubenombono wekhonkrithi wesicwangciso somgangatho wemephu yakho.
Indawo elula, enamagumbi amancinci: Ukuba le mephu ye-adventure ibibekelwe ngaphandle, kunokuba nzima ngakumbi ukukhokela abadlali naphi na apho ufuna ukuya khona. Khumbula ukuba ungasoloko usebenzisa iingcango zentsimbi ukuthintela kunye nokukhokela abadlali, kodwa ungasebenzisa izinto ezinje ngemingxunya, uluhlu lweentaba, kunyeisixekoumyalelo.
cbd kunye nonxibelelwano lwe-adderall
yintoni engaphaya kweyeza
Iziphumo zexesha elide ze-seroquel
ingakanani imaca yokuthatha
yintoni i-ascorbic acid